आयुर्वेद Archives – healthykhabar.com
कर्णालीको स्वास्थ्यमा फड्को,२६ भेन्टिलेटर र ६२ आईसीयू बेड सञ्चालन
सुर्खेत,२१ भदौ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण मुलुकमा बढ्दै जाँदा यसले कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा नयाँ अवसर जुटाइदिएको छ । विगतमा झाडापखाला, हैजा जस्ता सामान्य रोगबाट समेत मृत्युवरण गर्नुपर्ने यस प्रदेशमा अहिले कोरोनाकै कारण स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास भएको छ । चिकित्सकको अनुहार देख्न नपाउने यस प्रदेशका दुर्गम ठाउँका बासिन्दाले अहिले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उपचार पाउन थालेका छन् । स्वास्थ्यचौकी अस्पतालमा स्तरोन्नति भएका छन् । अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) र भेन्टिलेटर जस्ता महìवपूर्ण उपकरण थपिएका छन् । व्यक्तिगत सरसफाइमा सुधार आएको छ । आयुर्वेदिक उपचारप्रति पनि ध्यान गएको छ । यी सबैको विकास कोरोनाकै कारण भएको स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध पदाधिकारी बताउँछन् । २६ भेन्टिलेटर र ६२ आईसीयू बेड कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अघि कर्णाली प्रदेशमा आठवटा आईसीयू बेड र आठवटै भेन्टिलेटर थिए । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा पाँचवटा आईसीयू र तीनवटा भेन्टिलेटर तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा तीनवटा आईसीयू र पाँच भेन्टिलेटर थिए । अहिले कोरोना सङ्क्रमण रोक्न यी दुई अस्पतालमा आईसीयू…
तेत्तीस कोरोना संक्रमित आयुर्वेदिक उपचारले निको भए, कोरोना उपचारमामा आयुुर्वेदिक पद्धति प्रभावकारी बन्न सक्छ
कीर्तिपुुर, साउन ३२ गते । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उपचारका लागि हालसम्म पनि भरपर्दो औषधि आविष्कार हुन नसकेका बेला नेपालमा आयुर्वेदिक पद्धतिले छोटो समयमै सङ्क्रमित बिरामीले स्वास्थ्य लाभ पाउन थालेका छन् । कोरोनाका लागि आयुर्वेदिक पद्धति रामवाण नै नभए पनि सङ्क्रमितले चाँडो स्वास्थ्य लाभ गरेपछि चिकित्सक र बिरामीमा उत्साह देखिएको छ । कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा भर्ना भएका कोरोनाका ३३ जना बिरामी सात दिनमै निको भएर घर फर्किएका छन् । उनीहरूलाई स्वास्थ्य लाभ हासिल गर्न दुुई साताको समय पनि लागेन । अरू बिरामी पनि निको हुने क्रम बढ्दो छ । आयुर्वेद अनुसन्धान अस्पतालका अनुसन्धान अधिकृत डा. अमितमान जोशी भन्नुहुन्छ, “आयुर्वेद औषधिमा विभिन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने जडीबुटी प्रयोग हुने भएकाले कोरोनासँग लड्नसक्ने क्षमता भएको हो ।” उहाँका अनुसार कोरोना सङ्क्रमित भर्ना भएपछि आयुर्वेदविज्ञ तथा चिकित्सक टोलीबीच छलफल गरी श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगमा प्रयोग हुने औषधि प्रयोग गरिएको छ । यसैगरी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने जडीबुटी मिलाएर बन(ाइएको औषधि खान दिइएको छ । त्यसको सात दिनपछि पीसीआर परीक्षण गराउँदा सबैको रिपोर्ट…
इतिहासमै पहिलो पटक आयुर्वेद काउन्सिसले लियो लाइसेन्स परीक्षा, सबै विद्यार्थी उत्तिण
काठमाडौँ, २२ भदौ । नेपाल आयुर्वेद काउन्सिलले इतिहासमै पहिलो पटक लिएको आयुर्वेद चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा परीक्षा दिएका सम्र्पूण विद्यार्थी पास हुन सफल भएका छन् । परीक्षामा सहभागी भएका ६८ जना विद्यार्थी सबै पास भएका हुन् । काउन्सिलले भदौ १४ गते दर्ता लाइसेन्सको परीक्षा लिएकोमा आठ दिनपछि मात्र आइतबार नतिजा निकालेको हो । काउसिन्लका रजिष्ट्रार डा नारायण श्रेष्ठले आयुर्वेद चिकित्सकलाई समयानुकूल बनाउन परीक्षा काउन्सिलले नाम दर्ता परीक्षा लिएको जानकारी दिनुभया । उहाँले छ छ महिनामा लाइसेन्स परीक्षा सुचारु गर्ने बताउनुभयो । बिएएमएस तह सकेर कम्तीमा ६ महिनाको इन्टर्नसीप सकेका विद्यार्थीहरुले दर्ता परीक्षा दिनसक्नेछन् । यसअघि एमबिबिएस सरहको बिएमएस उतीर्ण विद्यार्थीले काउन्सिलमा नाम मात्र दर्ता गरी चिकित्सकीय अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था थियो। हालसम्म काउन्सिलमा ६३८ जना आयुर्वेद चिकित्सक दर्ता भइसकेका छन्।
दतिवनको औषधीय महत्व के छ ? यसका फाइदा के हुन् ?
काठमाडौं,१७ भदौ । दतिवन एक किसिमको जङ्गली बोट हो। यो वर्षा याममा उम्रने गर्दछ। यसको जरा र डाँठलाई दात माझ्न प्रयोग गरिने भएकाले यसलाई दतिवन भनिएको हो। दाँत दुख्दा, गिजा कमजोर भएमा र मुख दुर्गन्धित भएमा दतिवनको ताजा जरा राम्ररी सफा गरेर दात माझ्ने गरिन्छ। दतिवनको पात, फूल, जरा, बीउ, डाठलगायतका सम्पूर्ण अङ्ग नै औषधीय गुणले भरिएको हुन्छ। छालाको रोगमा दतिवनको जरा पिसेर बनाइएको लेप उपयोग गर्न सकिन्छ। यसको पातको रसलाई घाउ र खटिरा भएको ठाउमा मलहमको रूपमा लगाउन सकिन्छ। कुकुर, सर्प र बिच्छीले टोकेको ठाउामा दतिवनको पातको रस तुरुन्तै लगाइदिदा विष शरीरभित्र छिटो फैलन पाउदैन। उपचार केन्द्र लैजादा गर्दा यो घरेलु उपाय प्रयोग गर्न सकिन्छ। दतिवनको ताजा पात बिहान उठेपछि र राति सुत्नु अघि चपाएर खाएमा कब्जियत नष्ट हुन्छ। त्यस्तै पखाला लाग्दा तीन ग्राम जति दतिवनका पातबाट तयार पारिएको काढा चिसो भएपछि मह मिलाएर पिउनाले बारम्बार भइरहने दिसा बन्द हुन्छ। मूत्रथैली र मृगौलाको पत्थरीलाई विस्तारै स(साना टुक्रा पारी पिसाबबाट…
आयुर्वेद संस्था विलय नगर्न आयुर्वेद चिकित्सक संघको माग
काठमाडौं, ९ भदौ । नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघले प्रदेशमा रहेका आयुर्वेद संस्थाहरूलाई विलय नगराउन सरकारसंग माग गरेको छ। संघले सातै प्रदेश सरकारसँग आयुर्वेद संस्थाहरूलाई विलय नगराउन माग गरेको हो । विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका आयुर्वेद सेवा कार्यक्रमहरु हटाउने, नयाँ कार्यक्रम नदिने, इन्टिग्रेसनको नाममा आयुर्वेदका संस्था विलय गराउने लगायतका कार्यले आयुर्वेदको मुल मर्ममा समेत प्रहार गरेको ठहर गरेको छ। आयुर्वेद चिकित्सक संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विलय कार्यलाइ तत्काल रोक्नु पर्ने माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, सरोकारवाला आयुर्वेदका संस्था, जनप्रतिनिधि लगायतका कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाहरुसँग अन्तरक्रिया, छलफल नगरी, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे लगायत कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरी लहडमा संगठन संरचना बनाउने, विगतदेखि संचालनमा रहेका जनस्तरमा प्रख्यात आयुर्वेद सेवा कार्यक्रमहरु हटाउने, नयाँ कार्यक्रम नदिने, इन्टिग्रेसनको नाममा आयुर्वेदका संस्था विलय गराउने लगायतका कार्यले आयुर्वेदको मुल मर्ममै प्रहार गरी कमजोर गराउने संघको ठहर छ ।’ संघले सातै प्रदेशमा टोली परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको…
औषधिमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा समस्या, स्वदेशी उधोगको लगानी संकटमा
काठमाडौँ, २८ साउन । नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात भइरहँदा ‘औषधि उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने’ नीति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सरकारले स्वदेशमा उत्पादन हुने औषधिको आयातमा रोक लगाई आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ तर नीति कार्यान्वयन नहुँदा औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा भएको २५ अर्ब रुपियाँ जोखिममा परेको छ । सरकारले गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा नेपाललाई औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने उल्लेख गरेको थियो । समृद्ध नेपाल निर्माणमा सरकारले औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा लिएको नीतिले नेपालमा औषधि उत्पादन गर्दै आएका उद्योगी खुसी भएका थिए । तर सरकारको यो नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको औषधि उत्पादकहरूको गुनासो छ । नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले भन्नुभयो, “स्वदेशी औषधि प्रवद्र्धन नगर्दा यस क्षेत्रमा रहेको ठूलो लगानी जोखिममा छ ।’’ नेपालमा सञ्चालित ५५ वटा औषधि कम्पनीमा २५ अर्ब रुपियाँ लगानी छ । अध्यक्ष दाहालका अनुसार भारत, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकमा औषधि उद्योगलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि उद्योग मुनाफामा नजाँदासम्म करमा छुट दिने…
स्वास्थ्य विज्ञानमा नेपालको सफलता
हामी स्वास्थ्यक्षेत्र र विज्ञानका आविष्कारक एवं गुरु धन्वन्तरिदेखि गङ्गालाल हृदय केन्द्रको नयाँ विशिष्ट सुविधासम्पन्न आधुनिक कक्ष निर्माणसम्म आइपुगेका छौँ । यो नेपाल र नेपालीको सफलता हो । मानव जातिको सफलता हो । किनभने हामी देश विशेषको नागरिकता हेरेर बिरामीको उपचार गर्दैनौँ । मानव जातिको विरामीको उपचार गर्छौं । नागरिकताको होइन, मानव जातिको उपचार । त्यसकारण यो मानव जातिको, यस भेगमा प्राप्त सफलता हो । म यो सफलतामा असाधारण भूमिका खेल्नुहुनेहरूलाई विशेष बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु । म यसको इतिहासतिर अलिकति फर्किन चाहन्छु । त्यतिबेला म गृहमन्त्री थिएँ । म हाम्रा पुराना शास्त्रमा अलिक रुचि राख्छु । मैले पढिआएको थिएँ, पिता जमदग्निले दिएको आदेश बमोजिम पर्शुरामले आफ्नै आमाको हत्या गरे तर आमाको शिर छिनाइसकेपछि छोरा पर्शुरामले बुबासँग भने, मैले तपाईंको आज्ञा त मानेँ, अब मेरो माग पूरा गरिदिनु प¥यो जो तपाईंले वचन दिनुभएको थियो । उनले भने, मेरी आमालाई फेरि जस्ताको तस्तै ब्युँझाइदिनुस् । अनि जमदग्निले अपरेसन गरेर आफ्नी पत्नी…
स्वास्थ्य सचिवको तलब ६४ हजार ७२६ , वरिष्ठ पाँचौ तहका नर्सको ३५ हजार ९५५
काठमाडौं, २० साउन । सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा सबै कर्मचारीको १८ देखि २० प्रतिशत तलब बृद्धिको घोषणा गरेको थियो । तर कसले कति तलब पाउने भने सार्वजनिक भएको थिएन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्मचारीको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत अधिकृत बाह्रौ तह (सचिव) को सुरुको तलब स्केल ६० हजार ६ सय ८० कायम भएको छ। सचिवले ग्रेड सहित ६४ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ पाउनेछन । यस्तै अधिकृतले ग्रेड सहित ४१ हजार ९ सय ९० पाउनेछन। यस्तै बरिस्ठ पाँचौ स्तरको कर्मचारी तथा नर्सले ग्रेड सहित ३५ ९ सय ५५ रुपैयाँ तलब पाउनेछन। सरकारले कायम गरेको तलबमान ०७६ साउन १ गते नै देखि लागु हुने छ । हेरौ सरकारले साउन १ देखी जारी गरेको नयाँ तलबमान
स्वास्थ्य मन्त्रीको छड्के वैद्यखानामा , १२० थरी औषधि बनाउने सस्थामा चार जना कामदारमात्र प्याकेजिङ्ग गर्दै , सात दिन भित्र कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन
काठमाडौँ १५ साउन । बुधबार दिउँसो उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव सहितको मन्त्रालयको टोली सिंहदरबार वैद्यखानामा पुग्दा तीनजना कर्मचारीमात्र काम गर्दै थिए । उनीहरु औषधिको प्याकेजिङ्ग बनाउँदै थिए । सरकारको यति ठूलो सस्थामा चार जना कामदार मात्र त्यो पनि प्याकेजिङ्ग गर्दै ? उपप्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो,–सबैभन्दा पुरानो इतिहासको धरोहर बोकेको सस्थालाई पशुपतिनाथले मात्र बचाएका रहेछन । बजारमा औषधिको अभाव भएपछि उपप्रधानमन्त्री यादव सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, उपप्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. केके राइ लगायतको टोली वैद्यखाना पुग्दा जम्मा चारजना कामदारले मात्र प्याकेजिङ्गको काम गरीरहेको देखेपछि उपप्रधानमन्त्री यादव आश्चार्यमा पुग्नुभएको थियो । यादवले पुरानो संस्थाको धरोहर बोकेको वैद्यखानालाई पशुपतिनाथले मात्र बचाएको रहेछ भन्दै इतिहास बोकेको सस्थाले पूर्ण रुपमा औषधि उत्पादन गरेर बजारमा पर्याप्त औषधि लैजान निर्देशन दिनुभयो । अनुगमनको क्रममा वैद्यखानामा चारजना काम गर्ने कामदार बाहेक केही संख्यामा लेखा र प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीमात्र थिए । उपप्रधानमन्त्री यादव, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री र…
डाबरको औषधिमा उच्च आर्सेनिक
काठमाडौँ,१५ साउन। झापाका ३६ वर्षे वेदप्रसाद शर्मा पेसाले कविराज हुन् । आयुर्वेदिक औषधिबारे आफैं जानकार छन् । करिब ४ वर्षअघि ढाड दुख्न थालेपछि उनले अर्का आयुर्वेदिक डा. सिद्धार्थ ठाकुरको सल्लाह लिए । अनि उनैको सल्लाहअनुसार शर्माले डाबर इन्डियाबाट उत्पादित आयुर्वेदिक औषधिहरू महायोगराज गुग्गुल, प्रवाल भष्म, महावाधिध्वंसन रस, वातगजांकुशरस, प्रवाल भष्म, बृहतवातचिन्तामणि रसलगायत औषधि सेवन गर्न थाले । कतिपय चिकित्सकले उनलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सल्लाह पनि दिएका थिए । तर डा. ठाकुरकै सल्लाहमा शर्माले डाबर इन्डिया लिमिटेडबाट उत्पादित ती औषधि सेवन गरे । औषधि सेवन गरेको केही दिनमा उनलाई हल्का सञ्चो भयो । निको भए जस्तो लागेपछि काममा फर्किए । दुई सातापछि ढाड दुख्ने समस्या फेरि बल्झियो । करिब ६/७ महिनासम्म निको हुँदा औषधि छाड्ने र बल्झिँदा खाने गर्न थालें,’ उनले भने, ‘त्यति गर्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि काठमाडौंस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा शल्यक्रिया गराएँ । केही दिनपछि छाला कालो हुने, उप्किनेलगायत समस्या देखिए । न्युरो अस्पतालमा फलोअपमा जाँदा ढाडको समस्या निको भइसकेको थियो । तर छालाको समस्याले पिरोल्न थाल्यो ।’ विभिन्न ठाउँमा परीक्षण गराउँदासमेत कारण पत्ता…
वीर अस्पतालका कर्मचारी उपकरण विगारेर किन बिरामीलाई बाहिर पठाउँछनः स्वास्थ्य मन्त्री यादव
काठमाडौ,१२ साउन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले वीर अस्पतालमा अत्यावस्यक उपकरणहरु कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा विगार्ने गरिएको बताउनुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री यादवले उदाहरण दिदै केही समय पहिले आफूले उद्घाटन गरेर गएको एमआरआइ मेसिन मन्त्रालय नपुग्दै विग्रिएको भन्ने समाचार आएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी कर्मचारीले वीरमा भएको उपकरण विगारेर कमिशन खानकै लागि नीजिमा जानुस भन्नु गलत भएको बताउनुभयो । त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कडा कारबाही गर्ने भन्दै यादवले उपकरण विगारीरहने प्रथा दोहोरिएमा वीरलाई नीजि सार्वजनिक अवधारणामा सञ्चालन गरिने चेतावनी दिनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्री यादवले आइतबार वीर अस्पतालको १३० औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै कर्मचारीको कारण वीर अस्पतालमा गरिब जनताले सेवा पाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले वीर अस्पतालमा अनेकौ बेथितिहरु विद्यमान रहेको बताउँदै त्यसलाई वीर अस्पताल प्रशासनले हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उपप्रधानमन्त्री यादवले गरिब जनता आउने भएकोले वीरको सेवा उच्चस्तरको हुनुपर्ने बताउनुभयो । वीरमा गरिब बिरामी आउँछन, त्यहाँमाथि उपकरण विगारेर कमिशनको लागि नीजिमा जा भन्न मिल्छ भन्दै जनताको करबाट सञ्चालित अस्पतालमा उपकरण विगार्नु दुःखद भएको बताए…
गाउँपालिकाको पहलमा जडिबुटी खेती
कास्की,१० साउन । जडीबुटीको संरक्षण र उपयोगलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा स्थानीयवासीको सक्रियतामा औषधीय वनस्पति सतुवाको व्यावसायिक खेती थालिएको छ। नेपालका संरक्षित वनस्पतिको सूचीका रूपमा रहेको सतुवाको संरक्षणका लागि स्थानीयवासीमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दै आयआर्जनमा समेत टेवा पु¥याउने उद्देश्यले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ स्थित छोम्रोङमा सामूहिक सतुवा खेती शुरु गरिएको हो। हिमालयन सतुवा एण्ड फार्मका रुपमा संस्थागत तवरले सात स्थानीयवासीको सक्रियतामा सतुवा खेती थालिएको पर्यटन व्यवसायी एवं संस्थाका अध्यक्ष नजरमान गुरुङले जानकारी दिए। सतुवा समुद्री सतहदेखि एक हजार ४०० मिटरको उचाइमा पाइने जडीबुटी हो। विशेषगरी एक हजार ६०० मिटरको उचाइ सतुवाका लागि अत्यन्त उपयुक्त मानिन्छ । गुरुङका अनुसार केही वर्षअघि सम्म छोम्रोङ आसपासका जङ्गलमा पर्याप्त मात्रामा सतुवा पाइन्थ्यो। केही वर्षयता भने बढ्दो चोरी सिकारीको क्रमसँगै यो सीमित भागमा मात्रै पाइन थालेको छ । सतुवाको बीउका लागि जिल्ला वन कार्यालय कास्कीले दुई लाख ९७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको अध्यक्ष गुरुङले बताए।
चितवन, ९ साउन । नेपाली काँग्रेस चितवनले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको तनाव व्यवस्थापनका लागि दुईदिने राजयोग शिविर आज सम्पन्न गरेको छ । पछिल्लो समय मानसिक तनावका कारण समाजमा हुने सामाजिक घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्दै आफूलाई असल नेताका रुपमा उभ्याउन सहज हुने भन्दै यो शिविर सञ्चालन गरिएको हो । काँग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले तनावले कसैलाई पनि फाइदा नहुने भएकाले तनावको व्यवस्थापन गर्दै सिङ्गो पार्टीसँगै देश बनाउन लाग्नु आवश्यक रहेकाले शिविरको आयोजना गरिएको बताए । शिविरमा ब्रह्मकुमार राजु घलेले प्रशिक्षण दिँदै मानिसको जीवनमा दुई तरिकाको तनाव हुने भन्दै यसको व्यवस्थापमा आफैँले ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए । बाह्य तथा आन्तरिक तनावका कारण मानव जीवन दुःखमय बनेको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रको सहआयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले राजनीतिलाई तनावले समस्यामा पारेको बताएका थिए । तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा मानव जीवन सुखमय हुने उनीहरुको भनाइ थियो । बाह्य सुख खोज्नु र पारिवारिक व्यवस्थापन गर्न नसक्नुका कारण मानव जीवन दुःखद बन्ने…
स्वास्थ्य र शिक्षामा पर्याप्त बजेट बिना देश विकासको परिकल्पना गर्न सकिदैन : स्वास्थ्य मन्त्री यादव
काठमाडौं, ३ साउन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारले स्वास्थ्यका लागि कम्तिमा पनि कुल बजेटको १० प्रतिसत बजेट विनियोजन नगरेसम्म देशको विकास सम्भब नभएको बताएकाछन् । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेटको ब्यबस्था नगरेसम्म देशको समृद्धिको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । पर्नेमा साडे ४ प्रतिसत बजेटमात्र विनियोजन गर्ने गरेकाले चाहेर पनि स्वास्थ्यमा प्रगति गर्न नसकिएको बताए । मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यादवले ‘साडे ४ प्रतिसत बजेटमध्ये ४ प्रतिसत कर्मचारीको तलव भत्तामै सकिने भन्दै बाकी रहेको आधा प्रतिसत बजेटले स्वास्थ्यमा केही हुन नसक्ने बताए । मन्त्रालयका सचिब रामप्रसाद थपलियाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ७९ प्रतिसत काम सम्पन्न गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धी बारे जानकारी दिदै ६५ वटा काममध्य ५१ वटा सम्पन्न भइसकेको बताए । १० वटा प्रगतिमा रहेको जानकारी दिदै थपलियाले छ प्रतिशत काम भने मन्त्रालयले गर्न नसकेको बताए । १५ सय…
औषधि व्यवस्था विभागद्वारा बजारमा नपाइने अत्यावश्यक औषधिको जानकारी पठाउन सूचना जारी , सातदिन भित्र इमेलमा पठाइसक्नुपर्ने
काठमाडौँ, ३ साउन । औषधि व्यवस्था विभागले अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्ने अत्यावश्यक औषधिको नाम लेखेर एक साताभित्र पठाउन चिकित्सक लगायत निजि स्वास्थ्य संस्थासंग जानकारी माग गरेको छ। बजारमा अत्यबस्यक औषधिको अभाव भन्ने समाचारहरु आइरहेकोले सात दिन भित्र चिकित्सक,नर्सिङ होम, अस्पताल , पशु चिकित्सक , आयुर्वेदिक चिकित्सक , भेटरिनरी चिकित्सक लगायत सबैले एक साताभित्र बिभागमा पठाइसक्नुपर्नेछ। बिभागले गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरि अभाव औषधिको नाम लेखी पठाउन आग्रह गरेको हो। उपचारमा आवश्यक पर्ने कतिपय जीवन रक्षक औषधि बजारमा उपलव्ध नभएको भन्ने गुनासा बढ्दै गएपछि विभागले यस्तो सूचना जारी गरेको हो । विभागका निमित्त महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीले मुटु, क्यान्सर, कलेजो, मिर्गौला लगायत कतिपय रोगका औषधिहरु उपचारका लागि अत्यावश्यक भएको तर नेपालमा उपलव्ध नहुँदा समस्या परेको गुनासो बढदै गएपछि यस्तो निर्णय लिएको बताए । बिभागको इमेल info@dda.gov.np र head.management@dda.gov.np मा इमेल गर्न सकिने जनाएको छ।
आयुर्वेद विज्ञ/कन्सल्टेन्ट ९ र १० तहका कर्मचारीहरुको समायोजन सूची सार्वजनिक (सूची सहित)
काठमाडौ,साउन २ गते । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ/कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ ९ र १० तहका कर्मचारीहरुको समायोजन विवरण आज सार्वजनिक गरेको छ।
पोखरामा सय शैय्याको प्राकृतिक चिकित्सालय बन्ने
पोखरा, १ साउन । पोखरामा करिब ०५४/५५ सालसम्म प्राकृतिक चिकित्सालय थियो, सीमपानीमा । डा चन्द्रकान्त सुवेदीले व्यक्तिगत रुपमा बनाएको उक्त चिकित्सालय त्यतिबेला पोखरामा प्रभाव जमाउन नसकेपछि नवलपुर सर्‍यो । भएको प्राकृतिक चिकित्सालय अन्तै सरेपछि प्राकृतिक चिकित्सा विधिमा रुचि भएका पोखरेलीलाई नवलपुर पुग्नुपर्छ । अहिले पनि कैयौं पोखरेली प्राकृतिक उपचारविधि खोज्दै नपवलपुर पुग्ने गरेका छन् । पोखरामै पुनः प्राकृतिक चिकित्सालय खोल्न उनीहरुले माग पनि गर्दै आइरहेका थिए ।सीमपानीमा भएको प्राकृतिक चिकित्सालय नवलपुर पुगेको करिब १ दशकपछि पोखरामा फेरि प्राकृतिक चिकित्सालय खुल्ने भएको छ । पोखरामा रहेको विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिले प्राकृतिक चिकित्सालय बनाउने भएको छ । १ वर्षभित्रै सेवा दिने गरी मंगलबार चिकित्सालयको उद्घाटन पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले गरेका हुन् । पोखरा १ नदीपुरमा रहेको विन्ध्यवासिनी धार्मिक गुठीको २१ रोपनी जग्गामा चिकित्सालय बन्ने भएको हो । आधुनिक चिकित्सा विधामा आधारित रहेर ल्याबसहिकतको प्राकृतिक चिकित्सालय बनाउन लागिएको समितिले जनाएको छ । ल्याबको अनुमानित लागत २६ करोड छ । चिकित्सालय २…
स्वस्थ जिवनका लागि योगलाई प्राथमिकता दिउँ
काठमाडौ,२२ असार । स्वस्थ जिवन यापनका लागि योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइएको छ । नसर्ने रोगबाट बच्न योग महत्वपूर्ण हुने हुँदा योगलाई सबैले अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान दर्शन विभागद्धारा आयोजित ‘योगदर्शन,जीवनशैली र स्वास्थ्य’ विषयक विचार गोष्ठीमा सहभागीहरुले योगद्धारा नै मानिसको जिवन बदलिनसक्ने भएकाले योगलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्राकृतिक चिकित्सक हरीप्रसाद पोखरेलले योगबाट धेरै रोगबाट बच्न सकिने बताए । उनले योगको सुरुवात नेपालबाट भएको प्रष्ट्याउँदै दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीन हुँदै विश्वभरी फैलिएको बताए । पछिल्लो समय पतञ्जलीको जन्मसमेत नेपालमा भएको पुष्टि भइसकेको भन्दै पोखरेलले रिग्वेदमा समेत योगलाई समावेश गरिएको बताए । योगलाई कर्मकुशलताको विज्ञानको रुपमा लिइएको भन्दै उनले नेपाललाई योगको थलोको रुपमा विश्वसामु चिनाउनुपर्ने बतए। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकलुपति वैरागी काँइलाले नेपालीको जीवनशैली विक्रितितर्फ लम्किएको बताए। उनले अस्वस्थकर जिवनशैलीको कारण रोगीहरुको संख्या बढीरहेको बताए । कार्यक्रममा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलले स्वस्थ जिवनको लागि योग गर्नैपर्ने भन्दै योगको महत्वबारे प्रकाश पारे । उनले योगलाई संस्कृतिसंग जोड्नुपर्ने…
कसरी घटाउने मोटोपना ? मोटोपनाले पैदा गर्ने रोग के हुन् ?
मोटोपन किन बढ्छ ? यो प्रश्न भन्दा पनि अर्को प्रश्नले हामीलाई बढी सताइरहेको छ । मोटोपन कसरी घटाउने ? जबकी अघिल्लो प्रश्नमै त्यसको समाधान छ । अर्थात मोटोपन बढ्ने कारणहरु खोतलेर त्यसको सही व्यवस्थापन गर्नु नै मोटोपनबाट छुटकारा पाउने सरल उपाय हो । मोटोपन किन बढ्छ त ? जवाफ हामीसँग नै छ । अनुचित खानपान, बढि आराम, मासिक धर्मको अनियमितता, थाइराइड, हार्मोनल असन्तुलन आदि कारणले मानिसको वजन बढ्छ । मोटोपन आफैमा रोग हो त ? मोटोपन आफैमा रोग होइन । तर, यसले रोगलाई जन्म दिन्छ । रोग भन्दा पनि हामी ज्यानलाई फिटनेस राख्न मोटोपन कसरी घटाउने भनेर घोत्लिरहेका हुन्छौ । मोटोपन भएपछि शरीर भद्दा हुन्छ । न लुगाफाटो लगाएको सुहाउँछ, न हेर्दा छरितो नै देखिन्छ । अर्कोतिर हिँडडुल गर्न सहज हुँदैन । शरीर मोटो भएपछि फुर्ति घट्छ । मोटोपनले पैदा गर्ने रोग मोटोपन घटाउनु वा मोटो हुँदै नहुनु वा मोटोपन व्यवस्थापन गर्नु भनेको शरीरलाई स्लिम बनाउनु मात्र होइन । संभावित…
नेपाल फर्मास्युटिकलको औषधि समेत गुणस्तरहिन,तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न बिभागको निर्देशन
काठमाडौँ, २१ असार । नमूना परीक्षणका क्रममा गुणस्तर न्युन पाइएपछि औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा गईसकेका ८ प्रकारका औषधिहरु रिकल ( बजारबाट तुरुन्त फिर्ता) गर्न सम्वन्धित औषधि उद्योगलाई निर्देशन दिएको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ख्यातिप्राप्त औषधि कम्पनी नेपाल फर्मास्युटिकलको औसधि न्यून गुणस्तर रहेकाले बिक्रीवितरण नगर्न औषधि ब्यबस्था बिभागले निर्देशन दिएको छ। यसरी विभागको निर्देशन पाउनेहरुमा छ वटा नेपाली कम्पनी छन् भने २ वटा भारतीय कम्पनी छन् । विभागका अनुसार नेपाल फर्मास्यूटिकल्स लेब्रोटरी बीरगञ्जले उत्पादन गरेको LPN-74165 Formin -GI forte, जीडी फर्मास्यूटिकल्स प्रालिले उत्पादन गरेको PITI-1702 Pantona, गोरखा आयुर्वेद कम्पनीका 1351 Avipattikar churna, Pet safa गरी दुईवटा, आरोग्य भवन वर्क प्रालि र सगरमाथा आयुर्वेदिक औषधि उद्योगका क्रमश 0169 Aarogya Balbel churna, 014 Pushyanug churna सहित छ नेपाली उद्योगका औषधि रिकल गर्न भनिएको हो । यस्तै अलकेम लेब्रोटरिज मुम्बई भारत 8282346 Almok-500 , सागा लेब्रोटरिज अमदावाद भारत बाट Ex-014018 Amoxyn-500 आएका क्रमश व्याजका औषधि पनि गुणस्तरमा फेल भएका छन ।